I-Apple Pay iza kufika kwaSirayeli ngoMeyi | Ndisuka mac
I-Apple Pay iza kufika kwaSirayeli ngoMeyi
A Isiqingatha sikaFebruwariSikwazisa ngelizwe elilandelayo apho iApple Pay yayiza kuthi gqi ngomhlaba: Sirayeli. Nangona kunjalo, kuyabonakala ukuba, kwakhona, izikhombisi ezibonisa ukumiselwa okusondeleyo azange ziqinisekiswe. Iindaba zamva nje ezinxulumene nokwaziswa kwamanqaku e-Apple Pay kwinyanga kaMeyi.
Ngokuka-Calcalist, u-Apple uceba ukumilisela i-Apple Pay kwa-Israyeli kwiveki yokuqala kaMeyi. Eli ziko liqinisekisa ukuba zonke iziseko eziyimfuneko zokuphehlelelwa kweApple Pay kweli lizwe sele zilungiselelwe kwaye zilungele ukusebenza.
Isizathu sokulibaziseka ekumiselweni kwe-Apple Pay kwa-Israyeli kungenxa yokuncipha koqoqosho kweli lizwe ngenxa yecoronavirus ukongeza kwinto yokuba inani lamashishini ebelingekaqwalaseli ukwamkela iApple Pay liphezulu kakhulu.
I-Calcalist ithi inani leebhanki ezivumile ukubonelela nge-Apple Pay kubathengi bazo liphezulu kakhulu, ke ngexesha lokumiliselwa kwayo, ayizukukwenza oko kuphela ebhankini, kodwa iya kufumaneka kuninzi lwezinto zemali ilizwe.
Isabelo se-iPhone kwa-Israyeli siyi-20%, isabelo, nangona singaphakamanga kakhulu, sinokunyuka kwiinyanga ezizayo xa iApple Pay iqala ukuba yindlela yokuhlawula eqhelekileyo kwilizwe. Namhlanje, itekhnoloji yentlawulo engenazingcingo eyaziswa yiApple ngo-2014 iyafumaneka kumazwe angaphezu kwama-50 kwihlabathi liphela.
Ilizwe lokugqibela lokwamkela I-Apple Pay nguMzantsi Afrika, nangona okwangoku ifumaneka ngeDiscovery, Nedbank ne-Absa kuphela. Okwangoku sisalinde iApple ukuba ivakalise ukwaziswa kumazwe athetha iSpanish, ngaphandle kweSpain neMexico, kodwa okwangoku akukho rumor malunga nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Pay iza kufika kwaSirayeli ngoMeyi
Ixesha lesibini leCiclos (Ukuzama) kwi-Apple TV + ilibazisekile: ngoMeyi 21
Ngoku ungathenga iMac mini M1 ngokhetho lwe-10 GB Ethernet